Soo dhoweynta Madaxweyne Farmaajo oo si weyn loogu soo baxay caasimada Puntland – Bosaso Times News
admin January 7, 2018 Soo dhoweynta Madaxweyne Farmaajo oo si weyn loogu soo baxay caasimada Puntland2018-01-07T10:16:22+00:00 Puntland, somali News No Comment
Waxaa magaalada Garoowe ee caasimada Puntland si weyn loogu soo dhoweeyey looguna soo baxay madaxweyne Farmaajo oo booqasho shaqo ku maraya Puntland.
Madaxweynaha oo ka soo degay garoonka cusub ee Garoowe International goor dhoweyd ayaa waxaa soo dhoweeyey madaxda ugu sareysa Puntland iyo ciidamada qalabka sida, saraakiishooda, qucaasha deegaanka, haweenka, dhalinyarada iyo b ulsha weynta reer Garoowe.
Waxaa laga dareemayey magaalada Garoowe diyaar garowga imaatinka madaxweynaha ee Puntland asbuucyadii la soo dhaafay. Waxaa wadooyinka lagu sharaxay calanka Soomaaliya iyo sawirada madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Sawirada waxaa ku qoran hal haska madaxweynaha dalka ee Nabad iyo Nolol. Baabuurta magaalada waxaa ka muuqda sawirka madaxweynaha oo dhinacyada uga dhegan.. Waxaad arkaysaa haween iyo rag badan oo sita calanka Soomaaliya iyo sawirka madaxweynaha.
Waxaa ka muuqday soo dhoweynta madaxweynaha sida weyn ee shacabka Garoowe u taageersan yihiin dawladiisa ayna uga dhursagayeen imaanshihiisa iyo safarkiisa Puntland.
Waxaa la filayaa in madaxweyne Farmaajo Puntland joogi doono maalmo dhowr ah uuna booqan doono magaalooyinak Qardho, Carmo iyo Boosaaso isaga oo mari doona dhinaca dhulka.
Waxaa wararku sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu mashaariic cusub dhagax dhigi doono oo Puntland ka qabsoomaya ayna bixinayso dawladda Federaalka ee Soomaaliya taas oo noqonaysa markii ugu horeysay oo macaawinada dalka si degdeg ah maamulada dalka loogu qaybiyo si loo gaarsiyo horumarka dadka oo dhan.
http://www.bosasotimes.com/soo-dhoweynta-madaxweyne-farmaajo-oo-si-weyn-loogu-soo-baxay-caasimada-puntland/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2018/01/farmaajogaroowe2.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2018/01/farmaajogaroowe2-150x150.jpg 2018-01-07T10:16:22+00:00 adminPuntlandsomali NewsFarmaajo,Garoowe,maxamed Cabdullahi Farmaajo,Puntland,SCWaxaa magaalada Garoowe ee caasimada Puntland si weyn loogu soo dhoweeyey looguna soo baxay madaxweyne Farmaajo oo booqasho shaqo ku maraya Puntland. Madaxweynaha oo ka soo degay garoonka cusub ee Garoowe International goor dhoweyd ayaa waxaa soo dhoweeyey madaxda ugu sareysa Puntland iyo ciidamada qalabka sida, saraakiishooda, qucaasha deegaanka, haweenka,...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Farmaajo, Garoowe, maxamed Cabdullahi Farmaajo, Puntland, SC
« Madaxweynaha Maraykanka oo ka carooday Buug cusub oo ceebo badan lagu sheegay
Muxuu salka ku hayaa dagaalka Somaliland ku soo qaaday Puntland »